War Deg Deg Ah::Muuse Biixi oo Shir Dag dag ah ugu yeedhay Tijaarta isaaq Kadib Xaalad Khatar ah Oo Soo Wajahday Maamulka Somaliland, – KHAATUMO NEWS
War Deg Deg Ah::Muuse Biixi oo Shir Dag dag ah ugu yeedhay Tijaarta isaaq Kadib Xaalad Khatar ah Oo Soo Wajahday Maamulka Somaliland,
Horjooga maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shir dagdag ah isugu yeedhay Badhtamaha Bishan dhamaan Ganacsatada Maamulka Somaliland
Muuse Biixi ayaa shirkan ugu baaqay in ay dhamaan Ganacsatada waaweyn Ee Beesha isaaq in ay soo xadiran .
Sida ay xoga ku heshay Khaatumonews waxaa xaalad khatar oo dhaqallo daro soo wajahay maamulka Somalialnd mudo 3 sano iyo dheeraad ah.
Maamulka Somaliland ayaa dhamaan dhaqaalihii soo gali jiray iyo kabkii Beesha Caalamku siinjirtay waxaa loo wareejiyay Muqdsho waxaana lagu war galiyay inuu saamigiisa ka qaato muqdisho sida mamulada kale uga qaatan.
Muuse Biixi ayaa cod heer ku diiday qorshaha wuxuuna beesha caalamka usheegay in uusan qaadaaneen Wax xamar laga qorsheenaayo ee ay saas kaga maqnaato.
Go aanka Muuse waxaa uu keenay in dhaqaalaha maamulkaasi hoos u dhaco boqolkiiba 40 taaso sababtay in uu hada kaalmo weydiiisto Ganacsatada Beesha isaaq,
Sidoo kale Muuse Biixi ayaa joojiyay Dhamaan Xafladihii iyo sanad guurooyinkii maamulkaasi kadib markii dhaqaalihii ku bixi jiray ee lagu damashaadi jiray la waayay.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Beesha Mareexaan oo Madaxweyne Farmaajo ku Wareejisay ciidan 30 sano aan Arag Mushahaar,
Next Post: War Deg Deg Ah:Puntland Oo Gobolada Ay xukunto Ka Mamnuucday Diyaarad Qaadatay Amarka Dawlada Somalia.
habaar iyo cayba wax nalagaga qaadi waa viva somaliland republic viva beeshayda qaaliga ah ee isaaq, niman caloosha timo ku leh oo ciilan habaarkoodu waxba na yeeli mayso! hhhhhhhhhhhh
muuse biixi xiligii caleemasaarkiisa wuxuu yidhi somaliland waa inay hiigsata qayrkeed oo ah japan iyo malaysia ee aynaan sadaqo ku noolaan, kolka been abuurka dhaqan baad u leedihiin. somaliland na maaha mid sadaqo gaal ku nool, waxaanu la qabsanayna taiwan iyo uae, inshallah dhawaan baydin daawan dekedii berbera iyo madaarkii berbera oo la dhameeyay maraakiib caalami ah iyo diyaarado caalami ahina kasoo degayaan si fiican uba xanuuste! hhhhhhhhh
shirkanse madaxweynaha qaranka ee jamhuuriyada somaliland ku baaqay waa mid loogaga hadlayo cudurka covid19 oo fara baas ku haya shacabka, lacagna loogu aruurinayo sidaan talaal looga hortago usoo iibsan lahayn shacabka jamhuuriyadana wada gaadho.
18 may na waxaa loo hakiyay dhaqaalihii la galin jiray in loogu bedelo wax tar bulshada la daala dhacaysa cudurkan aduunka oo gumaaday ee covid19 iyo abaaro baahsan oo iyana haatan soo kordhay.
Somaliland iyo qabiilka isaaq habaar iyo xabada wax looga qaadi waa ! kkkkkkkkkkk
Midnimadii dhimata walloonay waligeed dib u soo laabanayn ee beenta iyo xaarka iska du’o. Xamar dawladi ka ma jrito waxaana Soomaaliya ka xoolo, xoog, xiniinyo iyo xeelad badan jamhuuriyadda Somalialnd ee ka magaca iyo maamuska badan Faqashta saaqiday ee wali AMIMO ka ilaashato Al-Shabaab..
Waa kolkuu habaar tami jiray sidii habar.
Waar Somaliland dhaqaalaheedu cirkaa ayuu marayaa. Sadaqo dalal shisheeye wax lagu faano maha. Biyo gacma haaga ayaa looga dhergaa.
Bil Cakis, Beesha Caalamku Farmaajo ayay ka jaraysaa naasnuujintii ay naasnuujin jirtay.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, WAXAAD QORTEY WIXII UURKAAGA DHAANSANAA, HADII XAMAR KAALMO LOO WAREEJIYEY WAA WALAALAHEEN, EE ADIGU BUUHOODLE KA QAYLI INTA INDHUHU KAA SOO DHACAYAAN, SOMALILANDA NIN CIIL QABIIL QABAA WAXBA MA YEELO, SHIRKANA WAXA LAGAGA TASHANAYAA SIDII SHACAB IHYO DOWLAD LOO SOO IIBIN LAHAA TALLAALKA COVID 19, ADIGANA WAXBAANU KAAGA QADHIIDHI MARKUU YIMAADO, WAAYO INAAND XAMAR IHYO HARGEISA DAWARSATO MOOYAANE NAF KALE MA HAYSIDE.
Qabiilkii yaraa darbigaa soo celiyey awalba meesha qabyaalad baa lagu walaaqayey taasna waa iska soo dhamaatay, xataa dadkii baa kala yaacay. Hadana waxaa soo kordhay naag qaawan oo sawiradeeda la iibiyo iyo khaniisiin
Khaniisland awalba faaiido malaheyn